Adobe XD: Kere, Prototype, na Kesaa na Adobe si UX / UI Ngwọta | Martech Zone
Taa, etinyere m Adobe XD, Adobe si UX / UI Adobe maka webusaiti a na-egosipụta, ngwa weebụ yana ngwa agagharị. Adobe XD na-enyere ndị ọrụ aka ịgbanwe site na ntanetị ihe ntanetị gaa na mkparịta ụka mmekọrịta na otu pịa. Nwere ike ime mgbanwe gị imewe na-ahụ gị prototype melite na-akpaghị aka - dịghị syncing chọrọ. Younwere ike ihuchalu ihe ngosi gị, zuru oke na ntụgharị na ngwaọrụ iOS na gam akporo, wee kesaa ha n'etiti ndị otu gị maka nzaghachi ngwa ngwa.
Akụkụ nke Adobe XD Gụnyere:
Mmekọrịta mmekọrịta - Gbanwee site na imewe gaa na ụdị prototype site na iji otu ịpị, ma jikọọ bọọdụ iji kọwaa usoro na ngwa multiscreen. Jikọọ ihe eji emepụta site na otu artboard na ọzọ, gụnyere Repeat Grid sel. Tinye mmekorita ya na njikwa ihe nlere anya iji nwalee ma gosiputa ihe omuma ahu.
Kwusaanụ prototypes maka nzaghachi - Nweta njikọ websaịtị iji kọwaa nzaghachi maka atụmatụ gị, ma ọ bụ tinye ha na Behance ma ọ bụ ibe weebụ. Ndị nyocha nwere ike ịza ajụjụ ozugbo na ụdị mbido gị na akụkụ ụfọdụ nke imewe gị. Ga-amara gị ọkwa mgbe ha na-ekwu, na ha nwere ike nanị ume ha nchọgharị na-ahụ mgbanwe gị.
Ngwa ngwa, vasatail artboards - Ma ị na-arụ ọrụ otu artboard ma ọ bụ otu narị, XD na-enye gị otu arụmọrụ ọsọ ọsọ. Nzube maka ihuenyo na ngwaọrụ dị iche iche. Pan ma mbugharị na-enweghị lag oge. Họrọ site na ntinye ederede ma ọ bụ kọwaa nke gị, ma detuo n'etiti mbadamba ihe na-efunahụ ntinye nke ihe imewe gị.
Tinyegharịa Grid - Họrọ ihe dị na imewe gị, dịka ndetu kọntaktị ma ọ bụ ebe a na-ese foto ma jiri ha mepụtagharị ma ọ bụ kwụ ọtọ ugboro ole ị chọrọ - ụdị gị niile na ohere ị ga-anọ. Melite mmewere otu oge na ngbanwe gị ga-emelite ebe niile.
Nkwado Cross-platform Adobe XD na akwado Windows 10 (Universal Windows Platform) na Mac, tinyere ngwa mkpanaka eji eme gam akporo na iOS.
Akụ - Mee ka agba na ụdị agwa dị mfe iji jigharị site na ịtinye ha na ngalaba Akụ (nke bụbu akara ngosi), nke na-agụnye akara. Dezie agba ọ bụla ma ọ bụ ụdị agwa na panel ahụ ga-egosipụta mgbanwe gị na dọkụmentị gị niile.
Ihe atụ akara - Chekwaa oge na akara, ihe eji emegharị ihe na-ewepụ mkpa ịchọta na dezie ihe atụ nke akụ ọ bụla gafere akwụkwọ. Melite otu, ha ga-emelite ebe niile, ma ọ bụ họrọ ịhapụ ihe atụ akọwapụtara. Akara nwere ike buru eserese vector, foto raster, ma ọ bụ ihe ederede, enwere ike iji ha dị ka ihe n'ime Repeat Grids.
Cloudlọ akwụkwọ Cloud Cloud - Site na ijikọ Creative Cloud Libraries, ịnwere ike ịnweta ma tinye onyonyo raster, agba na ụdị agwa e kere na Photoshop CC, Illustrator CC, na ngwa Creative Cloud ndị ọzọ n'ime XD, ma jigharịa ha ebe ọ bụla na dọkụmentị gị.
Onye nyocha ihe onwunwe - Na-arụ ọrụ n'ime oghere na-enweghị ngwongwo ekele maka onye nyocha ihe onwunwe, nke na-egosipụta nhọrọ maka ihe ị họọrọ. Gbanwee ihe onwunwe dị ka ụcha oke na oke, jupụta agba, onyinyo, blurs, opacity, na rotation, na nhọrọ nnweta maka itinye aka, akụkụ, na Ntugharị Ntugharị.
Smart kanvas igodo - Bido mbata ngwa ngwa na mpaghara ebe ị mere, ma ọ bụ mee nhọrọ na bọọdụ ma jiri ụzọ mkpirisi ka mbugharị ya. Jiri mpi, touchpad, ma ọ bụ ụzọ mkpirisi keyboard mụọ ma ọ bụ mbugharị. Nwee nnukwu arụmọrụ ọbụlagodi na ịnwere ọtụtụ narị bọọdụ.
Ihe edere - Nọrọ na-ahazi ma lekwasị anya mgbe ị na-ejikwa mgbagwoju anya aghụghọ ekele a contextual obibia n'ígwé. XD gosipụtara naanị n'igbe ndị ejikọtara na tebụl ị na-arụ ọrụ, yabụ ị nwere ike ịchọta ngwa ngwa ịchọrọ ngwa ngwa.
Nhazi usoro nhazi - Na-enweghị atụ see, jigharịa, na remix imepụta ihe eji eme ihe site na iji snap-to grids na ngwaọrụ ndị ọzọ na-enweghị nghọta nke na-enyere gị aka ịme nha nha n'etiti ihe, nkpuchi na ụdị, otu, mkpọchi, mmezi, na kesaa ihe eji emepụta, na ndị ọzọ.
Blur mmetụta - Mee ngwa ngwa kpughee otu ihe ma ọ bụ ihe ndabere dum iji gbanwee ebe mgbakwasị ụkwụ gị, na-enye ya omimi na akụkụ.
Vasatail linear gradients - Mepụta gradients mara mma site na iji njikwa ihe ngosi dị mfe ma doo anya na Picker Agba. I nwekwara ike ibubata gradients site na Photoshop CC na Illustrator CC.
Ngwaọrụ Pen nke oge a - Jiri mkpịsị odee jiri usoro Pen depụta usoro na ụzọ dị mfe. Jiri ụzọ omenala, tinye ma ọ bụ wepu isi ihe arịlịka, jikwaa ahịrị dị mfe, ma gbanwee n'etiti ụzọ gbagọrọ agbagọ na nke nwere nkuku - ha niile nwere otu ngwa ọrụ ahụ.
Boolean otu edezi - Mepụta na nnwale na ụdị dị mgbagwoju anya site na ijikọta otu ihe site na iji ndị ọrụ Boolean na-enweghị mbibi.
Ihe ndozi ederede - Ederede ederede na akara aka iji bulie ahụmịhe onye ọrụ. Mfe gbanwee mkpụrụedemede ederede dị ka font, typeface, size, nhazi, nhazi oghere na ntanetị. Gbanwee ọdịdị nke ederede gị otu ụzọ ị si agbanwe ihe ndị ọzọ na XD dị ka opacity, jupụta, ndabere na nsogbu adịghị, na oke.
Nchịkwa agba agba - Choo agba site na itinye ụkpụrụ ziri ezi ma ọ bụ site na ịlele site n'ime ma ọ bụ n'èzí XD na Eyedropper. Mepụta ma chekwaa agba agba, ma jiri ụzọ mkpirisi maka akara hexadecimal na Picker Agba.
Ihe ndi UI - Mee ngwa ngwa na ngosiputa maka Apple iOS, Ihe Ngwaọrụ Google, yana Microsoft Windows ngwaọrụ site na iji akụrụngwa njirimara ọrụ dị elu.
Detuo na mado site na ngwa ngwa ndị ọzọ - Weta ihe osise n'ime XD site na Photoshop CC na Illustrator CC.
Ọnọdụ ihu igwe iOS na gam akporo - Hụchalụ atụmatụ gị na mmekọrịta gị na igwe ndị ị na-achọ. Mee mgbanwe na desktọọpụ wee nwalee ha na ngwaọrụ gị maka ikwesị ntụkwasị obi na iji rụọ ọrụ.
Hotspot hinting - Na-akpaghị aka gosipụta ọnọdụ ndị na-ekpo ọkụ na mbido gị ka ndị ọrụ wee nwee ike ịhụ mpaghara ndị metụtara mmekọrịta na ịpị.
Ntuziaka nchịkwa - Mepụta otutu URL si na otu faịlụ ịkọrọ nsụgharị dị iche iche nke prototype gị. Kekọrịta ọnụọgụ na-enweghị nsọtụ nke ụdị nnabata, ma nweta nfe ma hichapụ ha na akaụntụ Creative Cloud gị.
Detuo mmekorita prototype dika vidiyo - Ka ị na-pịa site na preview, dekọọ MP4 faịlụ ịkọrọ gị otu ma ọ bụ ndị nketa oke (Mac naanị).
Bupu ihe osise, akụ, na mbadamba ihe - Mbupụ ihe oyiyi na aghụghọ na usoro PNG na SVG, nke ị nwere ike hazie maka iOS, Android, web, ma ọ bụ ntọala ntọala nke gị. Bupu mbadamba ihe ma obu ihe ndi mmadu. Na kerịta akụ na tebụl site na mbupụ ha dịka faịlụ PDF ọ bụla ma ọ bụ dịka otu faịlụ PDF.
Multi-asụsụ nkwado - Asụsụ akwadoro gụnyere Bekee, French, German, Japanese, na Korean.
Ozi email maka nkwupụta - Nweta ozi email mgbe ndị nketa oke na-ekwu maka ihe ngosi weebụ gị. Enwere ike izipu ozi ịntanetị n'otu n'otu ma ọ bụ zụọ ya na nchịkọta kwa ụbọchị
Kachasị mma, Adobe XD na-abịa na akwụkwọ ikikere m maka Adobe Creative Suite!
Ngosipụta: Anyị bụ ndị mmekọ nke Adobe.
Tags: adobeAdobe creativelọadobe xdprototypingUi imeweahụmahụ onye ọrụonye ọrụ interface